Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် ကျော် Flow ပုံမှန်ဖိအား Rapid ဆိုးဆေးစက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ကျော် Flow ပုံမှန်ဖိအား Rapid ဆိုးဆေးစက် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ကျော် Flow ပုံမှန်ဖိအား Rapid ဆိုးဆေးစက်
ACME MACHINERY INDUSTRY CO., LTD. တစ်ဦးနာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောထုတ်လုပ်သူ, ပို့ကုန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ကျော် Flow ပုံမှန်ဖိအား Rapid ဆိုးဆေးစက်။ သူတို့ပူဇော်သောအရာမှာစျေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်သူတို့ ပို. ဆွဲဆောင်မှုနဲ့တွန်းလှန်ပါစေ။ ကျနော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်ကမ္ဘာအနှံ့မှမိတ်ဆွေများကရှိသမျှတို့သည်အ time.so မှာကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုကျွန်တော်တို့နှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်အခမဲ့ခံစားကြည့်စေလိုပါသည်။
ပုံစံ - AM-SF
dual စီးဆင်းမှုစနစ်၏တီထွင်ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းသည်နိုင်ငံများစွာတွင်မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။.ဒါဟာအပြည့်အဝလျှံဆိုးဆေးနှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်,အပြည့်အဝဂျက်စီးဆင်းမှုဆိုးဆေးသို့မဟုတ် Semi-ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်အညီဆေးထိုးစီးဆင်းမှုဆိုးဆေး,ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလေးချိန်(700 ကျော် gm/yd)ထိုကဲ့သို့သောဝါဂွမ်းအဖြစ်ယက်သို့မဟုတ်ဇာထိုးထည်၏,ကော့တေး,သိုးမွှေး,polyester,နိုင်လွန်နှင့်ပေါင်းစပ်စသည်တို့ဖြစ်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.dyeing-machine.com/my/over-flow-normal-pressure-rapid-dyeing-machine.html
အသိဉာဏ်ပေါ်သယ်ဆောင်မြင့်မားသောဖိအားစဉ်ဆက်မပြတ်အမြန်ဆေးဆိုးစက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့်နှင့်အတူမျိုးဆက်သစ်ဆေးဆိုးစက်. တော်လှန်ရေးသမားဆန်းသစ်တီထွင်မှု,ပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ. 65 ကျော်ကိုသိမ်းပါ%ရေ,ရေနွေးငွေ့,လျှပ်စစ်ဓာတ်အား,နှင့်အရန်,65 လျှော့ချ%ရေဆိုးနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှု၏. အဆိုပါစက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့်သိရသည်,ယူရိုအပါအဝင်,ဦး.S.က.,ဦး.ငွေကျပ်.,အီတလီ,ဂျာမနီ,တရုတ်,ထိုင်ဝမ်,ဂရိ,ကြက်ဆင်,အိန္ဒိယ,ဂျပန်,ထိုင်းနိုင်ငံ,အင်ဒိုနီးရှား,မလေးရှား,ဗီယက်နမ်,ကိုရီးယား&မင်္ဂလာပါ;&မင်္ဂလာပါ;စသည်တို့.,200 ကျော်အပိုင်းပိုင်းမူပိုင်ခွင့်စုစုပေါင်း.၎င်းစက်သည်ထူးချွန်သောလုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုနှင့်ထိုင်ဝမ်အစိုးရမှထိုင်ဝမ်ထူးချွန်ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီး ၄ င်း၏ထူးချွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စက်မှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအပေါ်တွင်ထားရှိမှုတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။. အဓိကအင်္ဂါရပ်များ: အစွန်းရောက်အနိမ့်နှင့် uni-အရက်အချိုး:၁:2.5~3.5 စဉ်ဆက်မပြတ်အမြန်နှုန်း လျင်မြန်စွာဖြန့်ဝေ ဆေးဆိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသံသရာအချိန်ကာလဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အမျိုးမျိုးသောဆိုးဆေးလုပ်ငန်းစဉ်အချိန် ပြီးပြည့်စုံသောမျိုးဆက်ပွား ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာသုတ်ခြင်းအခမဲ့ ပွတ်တိုက် အလွန်အမင်းနိမ့်တင်းမာမှု,အစွန်းကောက်အခမဲ့ Excellent ကယူနီဖောင်းဆိုးဆေး အသိဉာဏ်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် မြင့်မားသောဖိအားမြင့်မားသောအပူချိန်ဖျန်,သုတ်ခြင်းနှင့်အအေး အလွန်နည်းပါးသောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု Teflon အပေါ်ယံပိုင်း အပူလဲလှယ်အတွက် built တိုက်ရိုက်ကျွေးမွေးဓာတုအမှုန့် အကောင်းဆုံးဆေးဆိုးပရိုဂရမ်းမင်း မျိုးစုံ-system ကိုသုတ်ခြင်း နအဖ-စနစ် ကြမ်းပြင်ကိုခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ
ကျော် Flow ပုံမှန်ဖိအား Rapid ဆိုးဆေးစက် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ ကျော် Flow ပုံမှန်ဖိအား Rapid ဆိုးဆေးစက် ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ ကျော် Flow ပုံမှန်ဖိအား Rapid ဆိုးဆေးစက် ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan
Flow Rapid ဆိုးဆေးစက် 110 OverC
110&ထုံးစံအတိုင်း;Flow Rapid ဆိုးဆေးစက်ကျော် အသွင်အပြင် MAX.အလုပ်လုပ်အပူချိန် 110̊ဂနိုင်လွန်အထည်ဆေးဆိုးခြင်းအတွက်ကောင်းသော. အလွန်နိမ့်ယိုယွင်းမှုဆိုးဆေးဆိုးဆေးအလွန်နိမ့်အရက်အချိုး 1:4~7,၎င်းသည်ဆိုးဆေးအသုံးပြုမှုကိုလျော့နည်းစေသည်,ဓာတုပစ္စည်း,စွမ်းအင်,ရေ&effluent ကုသမှု၏ကုန်ကျစရိတ်. ရွေးချယ်စရာ ရွေးချယ်စရာကိရိယာများ စက်ကိုစတင်ရန်နှင့်အရက်စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ထိန်းချုပ်ရန်အင်ဗာတာ,ပါဝါစားသုံးမှုကိုလည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏. ရေမီတာကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ရန်စီးဆင်းမီတာ. ရေပူပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ရေတိုင်ကီကိုအပူပေးပြီးစုစုပေါင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ချိန်ကိုသက်သာစေသည်. အမွှာ-ဓာတုဗေဒတိုင်ကီသည်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆိုးဆေးများကိုတစ် ဦး ချင်းစီ ပြင်ဆင်၍ အလိုအလျောက်အစာကျွေးရန်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်. ယိုစီးမှုအချိန်သက်သာစေရန်စွမ်းအင်ယိုစီးမှု. တစ်ပြိုင်နက်တည်း Chem.စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်တည်ငြိမ်ကျွေးမွေးသေချာစေရန်နို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် အင်္ဂါရပ်များ အစွန်းရောက်အနိမ့်အရက်အချိုး 1:4~5 ရေကို minimize,ဓာတုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု,အလဟ water ဖြစ်သွားသောရေသန့်စင်မှုသည်အလွန်ကျဆင်းသွားသည်. ACME သည် round round type ဆေးဆိုးစက်၏ရှေ့ဆောင်ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့သော ၃၅ နှစ်ကျော်ကကမ္ဘာပေါ်ရှိမူလဒီဇိုင်နာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် အင်္ဂါရပ်များ အလွန်နိမ့်ယိုယွင်းမှုဆိုးဆေးဆိုးဆေးဆိုးဆေးပစ္စည်းသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချသည်,ဓာတုပစ္စည်း,စွမ်းအင်နှင့်ရေအပြင်စွမ်းအင်သန့်စင်ကုန်ကျစရိတ်. CREASE MARK အခမဲ့ဖြစ်သည်,အထည်ထိထိတွေ့မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါပိုကောင်းတဲ့ထည်ထိတွေ့ခံစားမှုရရှိ&တွန့အမှတ်အသားများဖယ်ရှားပစ်. ပိတ်ထည်ထဲကနေပျံ့နှံ့ယင်းကြောင့်လည်ပတ်နေစဉ်ဆိုးဆေးထည်စနစ်တကျပေမယ့်မူမမှန်သိုလှောင်မှုဆေးဆိုးခန်းထဲမှာ.ဤသည်ကိုလည်းတွန့်အမှတ်အသားများကနေတားဆီး. UNIFORM ဆိုးဆေးအထည်နှင့်အတူဆိုးဆေးအရက်၏မြင့်မားသောလဲလှယ်အာမခံပါသည်,အရှင်ယူနီဖောင်းဆိုးဆေးအောင်မြင်ခဲ့သည်. အလိုအလျောက်ဓာတုဆေးထိုးစနစ်အော်ပရေတာအမှားများကိုလျှော့ချရန်ကူညီပါ&ဆိုးဆေးတစ်ပုံစံတည်းတိုးတက်အောင်. စီးဆင်းမှုဆေးကြောစနစ်အထူးအဝတ်လျှော်အချိန်ကိုလည်းလျှော့ချ. အနိမ့်တင်းမာမှုနှင့် PILLINGLESSအပြည့်အဝလျှံ nozzle ဖြင့်တပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်ဆေးကြောခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းနှင့်တင်းမာမှုနည်းပါးခြင်းစသည်တို့သည် lycra အထည်များ၏အကောင်းဆုံး elasticity ကိုရရှိသည်။. အခြားထူးခြားချက်များ အခြားအင်္ဂါရပ်များ နေရာလိုအပ်ချက်သိမ်းဆည်းပါ. စက်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်သည်ပုတီးစေ့များကိုပေါက်ကွဲစေသည်. စက်၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်တွင်ထည်များမဖောင်းပွစေရန်ရှောင်တိမ်းခြင်းကဲ့သို့သောမှန်များရှိသည်. အပိုထည့်သည့်တိုင်ကီ၏သွယ်ဝိုက်ရောစပ်ပေးခြင်းသည်အထိခိုက်မခံသောဆိုးဆေးပစ္စည်းများကိုခဲခြင်းမှရှောင်ရှားသည်. အခန်းတိုင်းရှိ Teflon စာရွက်သည်အထည်များကိုချောမွေ့စွာရွေ့လျားစေသည်&ဆေးပြားကိုရှောင်. microprocessor နှင့် temperature controller နှစ်ခုလုံးတပ်ဆင်ထားသောစက်များကိုအပြည့်အဝအလိုအလျောက်သို့မဟုတ် Semiutomatic ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်. အမှန်တကယ်ထည်ပြေးမြန်နှုန်းကိုပြသနိုင်ဖို့ချုပ်ရိုး detector,နှင့်တော်လှန်ရေးနှုန်းသည်၎င်း၏သံသရာအချိန်.ချုပ်ရိုးကိုလည်းအလိုအလျှောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ